बाँसबारी न्युरोमा बेहोस नपारी मस्तिष्क ट्युमरको सफल शल्यक्रिया, बिरामीको बोली बचाउनु थियो चुनौती – Health Post Nepal
२०७५ मंसिर २५ गते १८:३२
बाँसबारीस्थित उपेन्द्र देवकोटा मेमोरियल नेसनल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजिकल एन्ड एलाइड साइन्सेस (न्युरो अस्पताल)मा मस्तिष्क ट्युमरका बिरामीको बेहोस नपारी गरिने (अवेक क्रानियोटोमी) विधिबाट सफल शल्यक्रिया गरिएको छ ।
२२ वर्षका एक युवाको मस्तिष्कको देब्रेतर्फ रहेको बोलीको केन्द्रलाई असर पुर्याउन सक्ने गरी रहेको ५x४ सेन्टिमिटरको ट्युमरको बेहोस नपारी टाउकाका नसाहरू लठ्याएर सफल शल्यक्रिया गरिएको हो । ६ घण्टा लामो शल्यक्रियापछि बरामीको बोली बचाउन सफल भएको अस्पतालले जनाएको छ । काठमाडौंका सर्फराज शर्मा सुरुमा छारेरोगको लक्षण देखिएर अस्पताल आएका थिए । जाँच गर्दा यस्तो समस्या देखिएको थियो । उनको शल्यक्रिया न्युरो सर्जन डा. प्रत्याश श्रेष्ठको नेतृत्वमा डा. सुरेश विक, डा. विभूषणकाल श्रेष्ठ संलग्न थिए । अस्पतालमा डा. उपेन्द्र देवकोटा जीवित रहँदा हातखुट्टाको शक्ति र चाल बचाउन यस्ता १० वटा शल्यक्रिया यसै विधिबाट गरिएको थियो । तर, बोली बचाउनका लागि गरिएको भने पहिलोपटक हो ।
शल्यक्रियाअगाडि शल्यक्रियामा संलग्नहुने सबैजना बसेर पहिले छलफल गर्यौँ र सर्फराजलाई अप्रेसन थिएटरमा लगी त्यहाँको वातावरणबारे जानकारी गरायौँ । शल्यक्रिया गर्दा बाहिरबाट टाउकाको नसामा नदुख्ने सुई लगायौँ । ट्युमर निकाल्नुअघि टाउको खोलेर मस्तिष्कमा एउटा विशेष यन्त्रबाट स्टिमुलेसन गर्दै मस्तिष्कको कुन भागबाट बोली आएको छ भन्ने रेखांकन गर्यौँ ।
शल्यक्रिया गर्दा अस्पतालमा रहेको विशेषखालको एमआरआईको माध्यमबाट बोलीको ट्र्याकहरू रेखांकन गरिएको थियो । त्यस्तै, भिडियो इइजीको माध्यमबाट छारेरोगको केन्द्र ट्युमरको अघिल्लो भागमा रहेको ट्युमरको रेखांकन गरिएको थियो । यस्तो शल्यक्रियामा बिरामीको समन्वय चाहिन्छ । शल्यक्रियाका क्रममा बिरामी आत्तिने, चिच्याउने र कराउने गर्नुहुँदैन । शल्यक्रिया गर्दा बाहिरबाट टाउकाको नसामा नदुख्ने सुई लगाएर ट्युमर निकाल्नुअघि टाउको खोलेर एउटा विशेष यन्त्रबाट स्टिमलेसन गर्दै मस्तिष्कको कुन भागमा बोली आएको छ भन्ने रेखांकन गरिन्थ्यो ।
यसक्रममा बिरामीलाई १ देखि ५० सम्म गन्न लगाइने, फोटाहरू चिन्न लगाउँदै सुनेको कुरा बुझे–नबुझेको यकिन गर्दै शल्यक्रिया गरिएको थियो । हातखुट्टाको चालबारे पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
कसरी सफल पारियो शल्यक्रिया ?
शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकको उपचार अनुभूति यस्तो छ–
शल्यक्रियाअगाडि शल्यक्रियामा संलग्नहुने सबैजना बसेर पहिले छलफल गर्यौँ र सर्फराजलाई अप्रेसन थिएटरमा लगी त्यहाँको वातावरणबारे जानकारी गरायौँ । शल्यक्रिया गर्दा बाहिरबाट टाउकाको नसामा नदुख्ने सुई लगायौँ । ट्युमर निकाल्नुअघि टाउको खोलेर मस्तिष्कमा एउटा विशेष यन्त्रबाट स्टिमुलेसन गर्दै मस्तिष्कको कुन भागबाट बोली आएको छ भन्ने रेखांकन गर्यौँ । सर्पmराजको मस्तिष्कको बोलीको केन्द्रलाई बचाएर ट्युमर निकाल्यौँ । शल्यक्रियाका क्रममा बिरामीलाई १ देखि ५० सम्म गन्न लगायौँ । फोटाहरू देखाएर चित्रहरू चिन्न लगाइयो । सुनेको कुरा बुझी जवाफ दिन केही प्रश्नहरू पनि सोधियो । दिमागको देब्रे भागमा ट्युमर भएकाले बिरामीको दाहिनेतिरको हात, खुट्टा र जिब्रोको चाल पनि निरीक्षण गरियो । ट्युमर पूर्ण रूपमा निकालिसक्दा पनि सर्पmराजले जिब्रो, हात र खुट्टाहरू राम्रोसँग चलाउन सकेका थिए ।
बेलायतमा यस्ता शल्यक्रिया धेरै गर्नुभएका प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटाका साथी विश्वविख्यात न्युरो सर्जन हेनरी मार्ससँग पनि सल्लाह लिएका थियौँ । रोगको प्रकृतिअनुसार बिरामीको बोली बचाउन गाह्रो हुन सक्ने उहाँले बताउनुभएको थियो । तर, उपचार सफल भएकोमा हामी खुसी छौँ ।
Tags: ट्युमर, न्युरो
One thought on “बाँसबारी न्युरोमा बेहोस नपारी मस्तिष्क ट्युमरको सफल शल्यक्रिया, बिरामीको बोली बचाउनु थियो चुनौती”
DN. Sharma says:
Very excellent initationation of medical team and successful operation happening in our country. I fully appreciated to you all for excellent team work. For Nepalese people no need to be worry about the treatment to visit the outside of the country. Once again thank you so much for the team.